Nohazavain'i Semalt ny antony maha-zava-dehibe ny tranonkala ny vavahadin-tserasera amin'ny fitomboan'ny orinasanao
Ny fitsipika fototra iray amin'ny fahombiazana mahomby dia ny fahafantaranao ny mpanjifanao ary manintona ny zavatra ilainy. Ny fahafantarana izay tadiavin'ireo mpitsidika ny tranonkalanao sy ny fomba hanomezana azy ireo dia afaka manimba na manimba orinasa. Ny fitaovam-pikarohana momba ny tranokala dia mety ho sarobidy amin'ny fikarohana hoe inona no mahatonga ny mpitsidika anao hividy sy ny fomba hamadihana ny fitsidihany ho varotra.
Ato amin'ity lahatsoratra ity, hanazava izahay hoe inona ny analysana an-tranonkala ary ny antony maha zava-dehibe ny fampivoarana ny orinasanao.
Inona ny atao hoe Web Analytics?
Web Analytics dia ny fanangonana ireo fampahalalana mifototra amin'ny tranonkala mba hahazoana fahalalana ary hampivoarana ny traikefan'ny mpampiasa sy ny fisian'ny Internet.
Mitantara ny hoe iza no mitsidika ny tranokalanao sy ny fihetsiky ny mpitsidika raha vao eo izy ireo. Miaraka amin'ny fitaovana analytics tsara dia ho hitanao ny hoe firy taona ny mpitsidika anao, ny zanan'izy ireo, misy ny toerana misy azy ireo, ary maro hafa koa. Azonao atao ihany koa ny mahita, ara-bakiteny amin'ny fipihana bokotra, inona no nitarika azy ireo tamin'ny tranokalanao, ny faharetany nandany azy ireo sy ny pejy inona, sns. Ity karazana data ity dia ilaina amin'ny fanaovana ny tranonkalanao ho mahomby araka izay azo atao ary amin'ny famoronana. atiny izay mahaliana ny tsenan'ny kendrena anao. Ho solon'izay dia azonao atao ny manatsara fanovana sy fanovana araka ny tatitry ny mpikaroka momba ny tranokala; ity dia afaka manampy be dia be amin'ny fambolena ny orinasanao.
Maninona no manampy ny analysana tranonkala?
Fantaro ireo mpitsidika anao ary ampivoaro ny traikefan'ny mpampiasa azy!
Rehefa manapa-kevitra momba ny asa aman-draharahanao ianao dia tsy ilaina ny mikarakara ireo mpanjifa efa misy, fa izay azo atao hanatsarana ny traikefan'izy ireo. Ny fanapahan-kevitra toy izany dia tokony, amin'ny ankamaroan'ny tranga, dia manintona ny mpanjifa vaovao. Izany rehetra izany dia ao an-tsaina, ny hahafantaranao ireo mpitsidika ny tranokalanao dia ilaina amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra tsara.
Raha manana hevitra momba ny demografika mpitsidika ny tranokalanao ianao - izany hoe ny maha-lahy sy maha-vavy, ny taonany, ny toerana misy azy ireo, ny tombontsoany, sns - ho toerana tsara kokoa ianao hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa azy. Ary toy izany koa, raha afaka manara-maso ireo fitaovana inona ianao, navigateur sy rafitra miasa izay ampiasain'ny mpitsidika anao rehefa miditra amin'ny tranokalanao ianao dia ho tsara kokoa raha hanamarina sy hanatsarana ny mifanaraka amin'ny tranokalanao.
Ny ohatra iray tsotra dia hoe raha manaraka ny ankamaroan'ny mpitsidika mampiasa fitaovana finday ianao dia ho fantatrao ho laharam-pahamehana kokoa ny fanaovana ny tranokalanao ho mora raisina. Ary toy izany koa, raha ny aram-panadihadihana dia manara-maso ny taona sy ny lahy sy ny vavy mpitsidika anao, azonao atao ny mampifanaraka ny tranokala ho lasa mahasoa sy manintona azy ireo.
Ny fahafantarana ireo mpitsidika anao dia fomba tsara hanamboarana ny tranokalanao amin'ny tsena mety. Ny fanatsarana an'io karazana io dia hampirisika ny olona hijanona ao amin'ny tranokalanao mandritra ny fotoana maharitra ary, kosa, hitarika ny fiovam-po ambony kokoa.
Fantaro ny votoatiny mahomby indrindra
Ny fitaovam-pikarohana momba ny tranonkala dia hanasongadina ny votoatinao tsara indrindra. Azonao atao ny mianatra ny atiny izay manintona indrindra amin'ny fomba fijery, ny fitsidihana lava indrindra ary izay pejy mamangy ny olona aorian'izany. Amin'ny fomba hafa, mora mahita ianao hoe inona ny votoatiny mahomby indrindra, mamela anao hampiasa azy io amin'ny tombontsoanao.
Ohatra, rehefa nahafantatra ny votoatin'ny votoaty malaza ianao dia afaka manampy rohy mividy, miantso ny bokotra hetsika, sns. Amin'ny pejy na hanoro lalana ny mpitsidika mora kokoa amin'ny pejy misy sonia. Ny fahafantarana fotsiny hoe aiza no hampifantohana ny ezaka ataonao dia ahafahanao mampitombo ny tahan'ny fiovam-po sy amin'ny asanao amin'ny ankapobeny.
Ary toy izany koa, azonao atao ny mamerina manoratra ireo pejy mitarika ary mampiditra fampahalalana farany na fampandehanana vaovao fotsiny. Ankoatr'izay, azonao atao ny mamerina mamerina ny votoatiny mahomby manerana ireo fantsona hafa ary ampifanarinao amin'ny haino aman-jery sosialy, script webinar, sns.
Ary koa, ny fanaraha-maso ny lazan'ny votoatinao dia hanasongadina izay singa tsy mandeha tsara. Afaka mandany fotoana hanatsarana ny votoaty tsy dia malaza loatra ianao, na ampiasao fotsiny ny fahitana rehefa mamokatra - mahasoa kokoa - ny votoatiny.
Mampatanjaka ny SEO tranonkalanao
Ny optimization fikarohana (SEO) dia tena ilaina amin'ny fahombiazan'ny tranokalanao ary noho izany ny orinasanao. Ny haavon'ny habetsaky ny fifamoivoizana no mahasarika, ny haavon'ny fitarika sy ny fifanakalozana.
Ny analytics tranonkala dia afaka mampitombo ny SEO anao amin'ny lafiny maromaro. Noho ny fahatsiarovanao ireo toerana mahaliana sy demografika ny mpitsidika anao dia azonao atao ny mamokatra votoaty voarindra ary hita ao amin'ny Google sy milina fikarohana hafa. Ary koa, ny fanaraha-maso ny referrals dia hanome anao backlink hevitra.
Raha mitambatra ny Google analyst anao, azonao atao ny manara-maso ireo andian-teny fikarohana izay miteraka ny fifamoivoizana indrindra amin'ny tranokalanao. Ilaina izany amin'ny fiantohana ireo teny sy andian-teny ireo hampiasaina ao amin'ny atiny sy ny metadata.
Azonao atao aza ny mandeha mihoatra ny dingana iray ary ampiasao ny fanaraha-maso ny tranonkala. Mampiseho aminao ny zavatra tadiavin'ny mpitsidika rehefa tonga ao amin'ny tranonkalanao izy ireo. Ity safidy analytics ity dia ahafahanao mahita raha mifanaraka amin'ny sitrapon'ireo mpitsidika anao ny votoatinao misy anao. Ny fahafantarana na hihaona na tsia ny fanantenany dia ahafahanao manitsy ny votoatinao hanolotra ny traikefa mpampiasa tsara indrindra ary hanodina ny mpitsidika ho mpanjifa. Mety hamolavola hevitra ihany koa ianao ho an'ny lahatsoratra bilaogy vaovao.
Ireo fitondroana hevitra ambony indrindra
Ny analytics amin'ny tranokala dia afaka manara-maso ny niavian'ny referrals anao. Rehefa fantatrao ny dinika ambony indrindra dia azonao atao ny mampiasa paikady hampiakatra azy ireo hatrany. Ary koa, ny fahafantarana ireo faritra malemy anao dia ahafahanao manatsara azy ireo ary hiteraka fifamoivoizana bebe kokoa amin'ny tranokalanao.
Raha, ohatra, ny tranokalanao dia mahazo ny ankamaroan'ny mpitsidika azy avy amin'ny milina fikarohana, izany no ilazanao fa miasa tsara ny SEO anao. Raha, amin'ny lafiny iray, ny mpitsidika anao dia mirona ho avy amin'ny doka Facebook ary zara raha misy amin'ny milina fikarohana, afaka mahazo bebe kokoa amin'ny pejinao Facebook ianao ary manatsara ny SEO anao hampiasa ny milina fikarohana.
Fantaro ireo rohy mivoatrao
Ary koa ny hamaritana hoe avy aiza ny referrakao, ny analys de tranokala dia hilaza aminao hoe iza no tondroinao, fantatra amin'ny anarana hoe rohy ivelany. Rehefa voatanisa ny lisitry ny fidirana ivelany ianao dia afaka mampiasa izany fampahalalana izany mba hifandraisana amin'ireo tompon'ny tranokala ary manolotra fiaraha-miasa miasa.
Ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa hafa dia azo antoka fa hanampy anao hitombo. Fampiroboroboana ny fifampiraharahana sy fifanoloran-kevitra dia fomba iray mahasoa ny orinasanareo roa amin'ny fiaraha-miasa. Ny fahafantarana hoe inona ny fiaraha-miasa eo amin'ny orinasa no tena mahasoa anao, ary ho azy ireo, no dingana voalohany amin'ny famoronana ireo fifandraisana manan-danja ireo. Azonao atao ny manatona orinasa iray kendrena ary mizara ny tatitra momba ny analytics azy ireo, hahafahan'izy ireo hifanaraka amin'ny tolo-kevitrao.
Araho ny metaly e-commerce
Ny orinasanao dia mety mivarotra serivisy, vokatra, rindrambaiko na zavatra hafa rehetra miaraka. Na inona na inona amidinao, ny tatitra momba ny varotra ao amin'ny tranonkalanao dia tatitra manandanja lehibe hahafantaranao. Azonao atao ny mahita fomba fijery manan-danja toy ny fiovam-po amin'ny fiovam-po, referrer ambony, vola miditra sy vokatra mitarika, sns, ao anatin'ny tatitra iray. Rehefa fantatrao, ohatra, hoe inona ny vokatra vokarinao dia azonao atao ny mampifantoka ny ezaka ataonao amin'ny fampiroboroboana izany hatrany amin'ny fantsona samihafa. Ny fanohizana amin'ny fizotran'ny referrals dia ilaina ihany koa amin'ny famolavolana fiaraha-miasa ho avy izay hiteraka varotra bebe kokoa. Ny fanarahana ny metaly e-commerce dia ampahany ilaina amin'ny fampitomboana orinasa mahomby.
Inona ilay fitaovana an-tserasera tokony hataoko?
Misy fitaovana an-tserasera maro momba ny lozisialy misy ary ilaina ny mifidy fitaovana feno amin'ny orinasa marim-pototra sy mendrika. Ny tranonkala Semalt dia manolotra fitaovana fijerena olona maro isan-karazany hanampiana ny firenen'ny orinasa.
Iza moa i Semalt?
Natsangana tamin'ny taona 2013, Semalt dia sampam-pahalalana nomerika feno tanteraka. Manome fitaovana an-tranonkala ho an'ny serivisy analytics mandroso izy ireo ary koa ny serivisy SEO ary serivisy tranonkala hafa. Semalt dia manana mpanjifa afa-po an-jatony, izay maro amin'izy ireo no nandao ny fanoratana an-tsoratra sy horonantsary tao amin'ny tranokalan'ny orinasa.
Afaka manampy anao i Semalt:
Diniho ny fahitana amin'ny Internet
Hanadihady tranokala mifaninana
Fantaro ireo lesoka momba ny fanatsarana pejy
Miteny fiteny maro ny ekipa ao amin'ny Semalt, anisan'izany ny anglisy, frantsay, italiana, tiorka, sy ny maro hafa, koa aza manahy momba ny fiteny ho sakana eo aminareo sy ny fitomboan'ny orinasanao. Ireo mpikambana ao amin'ny ekipa dia manam-pahaizana amin'ny sehatry ny sahananao ary vonona handray ny fanontanianao.
Turbo ny sokatra
Tamin'ny 2014, ny ekipa Semalt dia nifindra tany amin'ny birao vaovao. Gaga izy ireo rehefa tonga teo, rehefa nahita ny sokatra iray tao anaty feony. Rehefa avy nanao fanadihadiana dia nianatra izy ireo fa ny tompon'ny biraony teo aloha dia nananany nefa tsy mila azy intsony. Faly ihany ny ekipa nanana mpikambana hafa. Nitazona ny sokatra izy ireo ary nantsoiny hoe Turbo. Nandany fotoana nandalinana momba ny sakafo tsara indrindra ho an'ny sokatra sy ny fomba hikarakarana azy ireo izy ary tsy ela dia nividy aquarium lehibe iray vaovao. Ankehitriny, miaina am-pifaliana ao amin'ny biraon'ny Semalt izy ary efa gaga amin'ny mascot amin'ny orinasa.
Ny fikatsahana ireo famakafakana tranokala dia tena mampisy fahasamihafana eo amin'ny orinasan'ny fandraharahana, ny coaching na ny tsy fahombiazanao. Ny fahafantarana ireo mpitsidika anao sy izay tadiaviny dia zava-dehibe amin'ny fanatsarana ny fisian'ny fanatrehanao an-tserasera ary mahomby amin'ny varotra ny vokatrao. Ny fisafidianana fitaovana malaza tahaka ny Semalt Web Analytics dia ahafahanao manara-maso ny votoatinao sy ny fahombiazanao amin'ny varotra, hahafantaranao ny demografian'ny mpitsidika anao ary indrindra indrindra manatsara ny fitsidihanao ny tahan'ny fifanakalozana fiovam-po.